काठमाडाै उडेका तीन हेलिकोप्टर खोलामा अवत,रण गरेर ठूलो दुर्घ,टऽना बाट जोगियो !! – ताजा समाचार
काठमाडाै उडेका तीन हेलिकोप्टर खोलामा अवत,रण गरेर ठूलो दुर्घ,टऽना बाट जोगियो !!
काठमाडौं । संखुवासभाबाट काठमाडौंका लागि उडेका तीन हेलिकोप्टर खोटाङको राजापानीस्थित साप्सु किनारमा आ,कस्मिक अव,तरण गरेका छन्।
अरुण तेश्रोको अनुगमनमा गएको टोली लिएर फर्किएका दुई वटा अल्टिच्युट र एउटा मनाङ एयरका हेलिकोप्टर मौ,सम ख,राब भएपछि अवतरण गरेका हुन्।
अहिले हलेसीमा सम्पर्क गरिरहेको र त्यहाँ मौसम सफा रहेको जानकारी आएपछि हलेसी जाने तयारी गरिरहेको स्थानीयले जनाएका छन् ।